8 Talaabo oo lagu Hormarinayo Natiijooyinka Suuqgeynta Dijital ah | Martech Zone
8 Talaabo oo lagu hagaajinayo Natiijooyinka Suuqgeynta Dijital ah
Friday, May 29, 2015 Khamiis, May 28, 2015 Douglas Karr
In badan oo naga mid ah ayaa si fudud isku dayaya inay sii wadaan barnaamijkeena suuqgeynta ee socda ee inta badan aanan haysan waqti aan ku horumarinno. Laakiin horumarintu waa dammaanadda keliya ee guusha joogtada ah iyo ka faa'iideysiga xawaarahayaga.
Sida laga soo xigtay daraasad uu sameeyay Gartner, 28% ee suuqleyda ayaa yareeyay miisaaniyadooda xayeysiinta dhaqameed si ay ugu maalgeliyaan howlaha suuqgeynta dhijitaalka ah. Tani waa isbeddel weyn oo la filayo inuu sii socdo oo uu kordho 2da sano ee soo socota. Haddii aad xiiseyneyso inaad uga faa'iideysato suuqgeynta dijitaalka ah meheraddaada, Suuqgeynta Digital Filibiin waxay bixisaa 8 talaabooyin istiraatiiji ah inaad raaci karto si aad u kordhiso natiijooyinka ololahaaga suuq geynta dijitaalka ah ee hadda socda ama soo socda.
Dib-u-eegis iyo dib-u-habeyn ku sameyso istiraatiijiyadda suuqgeynta dijitaalka ah.
Samee kooxdaada suuq geynta dijitaalka ah.
Ku tag bulshada, mobilada iyo deegaanka xeeladahaaga suuq-geynta dijitaalka ah.
Hirgelinta olole suuq-geyn dijitaal ah oo fara badan.
Kala duwanaan xeeladaha suuqgeynta dijitaalka ah.
Samee istiraatiijiyad abuuritaan muuqaal ah.
Ku kobci macluumaadkaaga fiidiyowyo, sawirro iyo xiriiriyeyaal.
Qaado maskax horumarineed oo joogto ah.
Tags: marketing digitaltallaabooyinka suuq-geynta dijitaalka ahhagaajinta natiijooyinka suuq-geynta dijitaalka ah
Liiskaaga hubinta si aad ugu fiicnaato Naqshadeynta Email-ka
Miyaa Xayeysiisyadaada Fiidiyowga la Arkaa?
26, 2015 at 3: 59 AM
Apr 14, 2016 at 1: 15 PM
Waxaan u maleynayaa in Suuqgeynta Dijital ahi ay aad muhiim u tahay maalmahan .Waxaan hadda ahay booqde joogto ah websaydhkaaga oo aan calaamadeeyay.